Vaovao - fanombohana maso eo amin'ny sehatry ny fikarakarana ara-pahasalamana - Sunshine Technologies
Fanombohana amin'ny maso ny mpamatsy vola amin'ny sehatry ny fitsaboana - Sunshine Technologies
Ny herinandro manerantany momba ny fandraharahana (Gew) Shina amin'ny taona 2020 (faha-14) dia notontosaina nanomboka ny 13 ka hatramin'ny 18 novambra 2020. Natao tany amin'ny firenena 170, Gew dia iray amin'ireo hetsika manan-kery lehibe eo amin'ny sehatry ny fandraharahana manerantany. Amin'ny taona 2020, Gew-China dia hanangona orinasa lehibe, andrim-panjakana misahana ny serivisy, mpamatsy vola sy mpandraharaha hamorona hetsika 50 + ao anatin'ny 6 andro, manangona mpamatsy vola 1000 + any Shanghai, miray amin'ny orinasa lehibe miisa 100 +, manintona mpandraharaha 1000, ary Miaraha mamorona famatsiam-bola ivelan'ny tsena sy sehatra fivarotana tsena mifantoka amin'ny indostria.
Noho ny fiantraikan'ny valanaretina, dia nanintona ny sain'ny mpampiasa vola ny fanombohana vaovao eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Dr. Xu Dehui, mpanorina ny Sunshine Technologies, dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny resadresaka nifanaovana fa nitombo ny fangatahana ho an'ireo sensor sy infôrtera tsy azo ampiasaina amin'ny thermopile ary ireo modely momba ny sensor noho ny epidemika. Ny fangatahana isam-bolana antonony dia mitovy amin'ny enim-bolana lasa izay. Mandritra ny fiantohana tanteraka ny fangatahana eny an-tsena, dia manatanteraka tsy tapaka ny fanavaozana ihany koa izahay. Tamin'ny volana Aogositra dia nahazo fanohanana avy amin'ny minisiteran'ny siansa sy ny teknolojia izahay mba hanatsarana bebe kokoa ny fahamarinan'ny sensor amin'ny toe-javatra misimisy. Amin'ny ho avy, ny orinasanay dia hanohy hampiasa vola amin'ny r & d ary handray anjara amin'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Niorina tamin'ny 2016, Sunshine Technologies dia orinasa teknolojia avo lenta iray manokana amin'ny fikarohana teknika, fampandrosoana ny vokatra, famokarana, varotra ary fanomezana fanampiana ara-teknika mifandraika amin'izany sy vahaolana ho an'ny sensor infrared MEMS. Sunshine Technologies dia tsy vitan'ny orinasa an-trano voalohany nifehezana ny teknolojia chip chip an'ny sensor infrared thermopile marani-tsaina, fa koa ny orinasa an-trano voalohany izay nametraka rojom-pamokarana fanohanana amin'ny famokarana vokatra. Ny sensor infrared thermopile marani-tsaina dia nanapotika tsara ny ampihim-bolan'ny vokatra vahiny. Ny sensor infrareda avo lenta an'ny orinasa dia manana mari-pahaizana fandrefesana mari-pana 0,05 ℃. (Ny mari-pahaizana momba ny fandrefesana ny mari-pana ara-pahasalamana dia matetika ihany no ilaina 0.2 0.2 ℃). Izy io dia manana teknolojia patanty sy fampandrosoana tsy miankina, ary ny mari-pahaizana momba ny maripana momba ny tontolo iainana amin'ny sensor dia mihoatra ny 15 heny noho ny vokatra avy any ivelany (nitombo hatramin'ny 3% na 5% ka hatramin'ny 0,2%). Ho fanampin'izany, ny sensor infrared an'ny Sunshine avo lenta dia mandray endrika endrika mahomby kokoa, ny fahombiazan'ny fiovam-po ara-batana-jiro-elektrika dia filaharana avo kokoa noho ny an'ny vokatra mitovy any ivelany. Mandritra izany fotoana izany, ny sensor infrared thermopile avo lenta an'ny Sunshine dia vokatra novolavolaina manokana, ary ny fanatsarana teknika mifanaraka amin'izany dia natao tamin'ny fonosana hihaonana amin'ny filan'ny mpamokatra tsaratsara kokoa.
Nandritra ny areti-mandringana COVID-19 tamin'ny taona 2020, ny Sunshine Technologies dia niantoka tamim-pahavitrihana ny famindrana sensor infrared ho an'ny thermometre amin'ny handrina manerana ny firenena, indrindra ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny famoahana sensor ho an'ireo faritra manan-danja amin'ny valan'aretina ao Hubei ary ny baikon'ny governemanta dia manome baiko ny isan'ny sensor thermometre an-doha mihoatra ny 2 tapitrisa. Nahazo mari-pankasitrahana sy fisaorana ny Sunshine avy amin'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknolojian'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ny foibem-paritany Hubei ho an'ny fisorohana sy fifehezana ny Novel Coronavirus Pneumonia Epidemie, ary ny vaomieran'ny teknolojia informatika sy informatika ao Shanghai. Ny sensor amin'ny thermosometra infrared an'ny kiran'ny Sunshine Technologies 'CMOS-MEMS dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ara-pitaovana mandritra ny valanaretina. Tsy afa-misaraka amin'ny fandrefesana avo lenta izy io, azo itokisana tsara sy tsy miovaova ny vokatra vokariny ary ireo teknolojia etsy ambony. Ny index indrindra no fepetra takiana fototra sy tanjona kendren'ny sensor infrared ao amin'ny indostria. Ny Sunshine Technologies dia nahazo fankatoavana avy amin'ny mpanjifa sy ny tsena tamin'ny alàlan'ny fanavaozana mitohy ireo teknolojia manan-danja.
Ny Sunshine Technologies dia handray ny fampandrosoana ny "Thermopile Infrared Chinese Core" ho iraka ampanaovina azy ary hiezaka ny ho lasa mpamatsy trano an-trano sy manerantany MEMS Thermopile Infrared Sensors, ary ho lasa mpitarika manerantany amin'ny indostrian'ny sensor infrared MEMS, hahatratra fiainana marani-tsaina sy tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fahatsapana infrared.